Tarreewwan Fo'uu Raawwachuu
Tarreewwan fo'uu odeeffannoo maadhee keessatti barreessuu si dandeessisu, achiin tarree waantota walitti aananii guutuuf harkisi.
Fakkeenyaaf, barruu "Ama" ykn "Amajjii" maadhee duwwaa keessatti galchi. Maadhee filadhuutii xiyyoo jala mirgaa kan handaara maadhee irratti hantuutee cuqaasi. Achiin maadhee filatame maadheelee muraasa irra gara mirgaatti ykn asiin gadi harkisi. Yeroo qabduu hantuutee gad dhiistu, maadheeleen shoolaman maqaalee ji'ootaatiin guutamu.
Maadheelee bukkee irratti hundaa'uudhaan deetaa ufmaan guutuu
Title is: Tarreewwan Fo'uu Raawwachuu